Khayre oo kulan soo dhawayn ah la qaatay Muwaadiniin isaga soo laabtay Liibiya. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Khayre oo kulan soo dhawayn ah la qaatay Muwaadiniin isaga soo laabtay Liibiya.
Khayre oo kulan soo dhawayn ah la qaatay Muwaadiniin isaga soo laabtay Liibiya.
February 20, 2018 - By: HORSEED STAFF
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta kulan iyo qado xafiiskiisa ugu sameeyey dad tahriib ku tegey dalka Liibiya kuwaas oo go’aansadey in ay dalkooda dib ugu soo laabtaan, kadib markii ay dhibaatooyin xoogan la kulmeen.
Ra’iisul Wasaare Khayre Waxaa kulanka qaddada ah Ku waheliyay Wasiiradda Wasaaradaha Amnigga, Arrimaha Gudaha, Dastuurka, Wasiir dawlaha Wasaaradda Gaashaandigga Soomaaliya.
Soo dhawayn Ka dib Ra’iisul Wasaaraha ayaa dhalinyaradda ka dhagaystay warbixin ku saabsan dhibaatooyinkii ay kala kulmayn Xabsiyadda iyo gudaha dalka Liibiya iyo sidda loogu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed dalka dibadiisa. Iyagooona madaxdii ka soo qabgashay kulanka ka codsadayn in ay ka caawiyaan sidii loo xalin lahaa cabashooyinkooda gaarka ah.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ugu horayn muwaadiniintan Ku soo dhawayay dalkooda hooyo. Waxuuna u balan qaaday in uu xalindoono waxkasta oo ay ka cabanayaan, isagoona sheegay in uu horay u sameeyay guddi ka shaqayndoono xaladda dadka ka soo laabanaya dalka Liibiya, si loogu abuuro fursado Shaqo, Waxbarasho iyo kuwo Caafimaad.
“Waxaan qorshaynay in aan qayb qayb usoo qaadno dhammaan dhibanayaasha Soomaaliyeed ee joogo Liibiya iyo guud ahaan dalka dibadiisa. Waxaana farxad wayn noo ah in aan aragno shacabkeena oo dib ugu soo laabanaya dalkooda.” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre.
Ugu dambayntii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa kula dardaarmay dhalinyaradda Soomaaliyeed in ay ku kalsoonaadaan dalkooda, iskana dhaafaan tahriibka wadamada shisheye. Isagoona cadeeyay in aysan jirin meel u dhaanta dalkooda Soomaaliya.
Faafin Horseed Media
DFoo sheegtay in ay qabatay sarkaal sare oo ka tirsan Alshabaab
March 22, 2019 By Mohamed Jeenyo
Aas loo sameeyay dadkii Muslimiinta ahaa ee lagu laayay New Zealand
March 22, 2019 By Abdirisak Faamoos
March 21, 2019 By Abdirisak Faamoos
March 21, 2019 By Mohamed Dahir